Obodo mara mma nke Toledo: Site na Escalona ruo La Puebla de Montalbán | Njem akụkọ
Ọ bụrụ na anyị na-atụle njem site na ọmarịcha obodo Toledo, anyị ga-eme nhọrọ n'ihi na e nwere ọtụtụ. Nke a na mpaghara Castilian La Mancha nwere ihe ùgwù ọdịdị nke na-achị Montes de Toledo na Osimiri Tagus na Tiétar, nke na-ejedebe na-eduga na nke mbụ.
Ma, nke ka nke, mbara ala Toledo nwere ọmarịcha obodo jupụtara na akụkọ ihe mere eme na ihe ncheta. N'otu aka ahụ, o nwere Okirikiri ala nwere mgbọrọgwụ edemede miri emi, ebe ọ bụ na ị gaghị echefu na enweghị atụ Don Quixote biri ọtụtụ ihe omume ya na ala ndị a. Ihe a niile na-ahazi mpaghara ị kwesịrị ịma nke ọma. Ka ị nwee onye ndu, anyị ga-egosi gị nhọrọ nke ọmarịcha obodo Toledo.
2 Orgaz, obodo ọzọ mara mma nke Toledo
3 Ocaña na Plaza Mayor ya mara mma
5 Escalona, ​​n'akụkụ mmiri nke Alberche
Onye isi obodo Plaza nke La Puebla de Montalbán
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka agụmagụ resonances, obodo a bụ ebe obibi nke Fernando de Rojas kwuru, edemede nke Celestine. Ọ bụ ndị mpaghara Torrijos, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'etiti mpaghara, na na ndagwurugwu na-eme nri nke Tagus.
Mana La Puebla pụtara ìhè maka nnukwu ihe nketa ya. Dị ka akwara center bụ Main Square, na-emekarị Castilian, nke ị nwere ike ịhụ chọọchị nke Nwanyị Nwanyị Udo, nke bụ mgbanwe Gothic na Renaissance. Ị ga-ahụkwa na square ahụ Ụlọ Nzukọ Alaeze na Obí nke Ngụgụ nke Montalbán, ihe owuwu Renaissance dị egwu nwere mmetụ Plateresque.
Anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na obodo a hermitages nke Nuestra Señora de la Soledad na Santísimo Cristo de la Caridad, nke mbụ bụ baroque na nke abụọ oge gboo; ndị nọn Francis na ndị nọn Conceptionist na ndị Ụlọ elu Saint Michael, ezumike nke ụlọ ụka ochie, nke bụ otu n'ime akara nke obodo ahụ.
Ma ị ga-agakwa, kpomkwem, na Ụlọ ihe ngosi nka Celestine iji ghọtakwuo onye edemede na ọnọdụ mmekọrịta ọha na eze nke nnukwu ọrụ nke akwụkwọ ozi anyị. Ọzọkwa, ịhapụ La Puebla, ị nwere Tagus Bridge, malitere na narị afọ nke XNUMX, na, ihe dị ka kilomita asatọ site na ya, ị ga-ahụ ọmarịcha Burujon Canyons, capricious ụrọ formations nke ga-echetara gị nke Grand Canyon nke Colorado.
Orgaz, obodo ọzọ mara mma nke Toledo
Castillo de Orgaz, otu n'ime obodo kacha mma na Toledo
Dị n'ụkwụ Sierra de Yébenes na n'ime Mpaghara Sisla Ị ga-ahụ obodo a mara mma nke anyị gụnyekwara n'ime obodo ndị mara mma nke Toledo maka nnukwu ihe nketa ya.
Iji malite njem gị na Orgaz, ị nwere ike ịga na Main Square, kamakwa ndị Chọọchị Santo Tomás Apostol, wuru ya Alberto de Churriguerra na narị afọ nke iri na asatọ, na Orgas nnukwu ụlọ, nke sitere na XIV ma bụrụ otu n'ime ihe nnọchianya nke obodo ahụ. Ụlọ elu ahụ ga-amasị gị, nke nwere mita iri abụọ n'ịdị elu.
E nwekwara foduru nke mgbidi ochie na Orgaz na abụọ n'ime ọnụ ụzọ anọ nke gafere ya: nke arches nke Belén na San José. N'otu aka ahụ, obodo nwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme àkwà mmiri, nke otu n'ime ha anya ise, nke ewuru na oge Carlos nke Atọ, na ọtụtụ hermitage dị ka nke El Socorro na La Concepción.
N'aka nke ọzọ, ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ụlọ mara mma nke juputara okporo ámá ya. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-ehota ụlọ Count Tierrapilares, Calderón de la Barca, Ioseph ma ọ bụ Vizcaíno. Na, n'ikpeazụ, Orgaz na gburugburu ya pụtara maka nnukwu uru nkà mmụta ihe ochie.
Dịka ọmụmaatụ nke a, kilomita ise site na obodo bụ district nke Arisgotas, nke ị ga-ahụ ihe na-adọrọ mmasị Visigoth Art Museum. N'otu aka ahụ, n'ugwu La Tocha ị nwere ike ịhụ menhirs abụọ malitere na narị afọ iri na ise, na Torrejon e nwere necropolis Roman na n'ime Villaverde ị nwere ike ịhụ foduru nke akwa mmiri na okporo ụzọ site n'otu oge ahụ.
Ocaña na Plaza Mayor ya mara mma
Onye isi obodo Plaza mara mma nke Ocaña
Obodo a magburu onwe ya dị n'ebe ugwu ọwụwa anyanwụ nke ógbè Toledo, n'ókè Aranjuez, nke, dị ka ị maara, bụ nke Madrid. Otu n'ime ihe nnọchianya ya bụ ibunye ya Main Square, wuru na narị afọ nke 2002 na ọdịdị baroque. Kemgbe XNUMX, Ọzọkwa, ọ bụ mmasị omenala.
Anyị na-akwado gị ka ị gaa na Ocaña the Nnukwu Isi iyi, a Renaissance ọla site Juan de Herrera na 1578, na Obí nke Cardenas, site n'otu oge ahụ, ma wuru na-esonụ canons nke Gothic, ọ bụ ezie na mgbanwe na Renaissance. N'otu aka ahụ dị ugbu a bụ Ụlọ ihe nkiri Lope de Vega, bụbu College of Society of Jesus.
N'aka nke ọzọ, ọ dịghị ụkọ ihe ncheta okpukpe ndị mara mma na Ocaña. Nke Parish Church nke Santa María de la Asunción Ewubere ya na narị afọ nke XNUMX n'ụdị neoclassical na foduru nke gara aga nke, n'aka nke ya, sitere na ụlọ alakụba ochie. Nke Churchka parish nke San Juan Bautista ọ bụ okenye, ebe ọ bụ na e debere ya na XIII, n'agbanyeghị na ọ mere mgbanwe ọtụtụ mgbe e mesịrị. N'agbanyeghị nke a, ọ gụnyere na nkà Mudejar nke Toledo.
La Ụlọ elu mgbịrịgba nke ụlọ ụka San Martin Ọ bụ naanị ihe fọdụrụ na nke a ma kwupụtala mmasị omenala. Ewubere na njedebe nke narị afọ nke XNUMX, ọ dị na ụdị Herrerian. N'otu aka ahụ, Ocaña na-enye gị ụlọ mara mma mara mma. N'ime ndị a, ndị Santo Domingo de Guzmán na Santa Catalina de Siena, abụọ nke ụdị Renaissance. Na, ugbua na mpụga, ị ga-ahụ Old Fountain, eleghị anya site n'oge Rom.
N'ikpeazụ, Ocaña nwekwara mgbọrọgwụ edemede. Don nwụrụ n'ime obodo Rodrigo Manrique, nke nwa ya nwoke raara nye Coplas nwụrụ nna ya. Nakwa n'obodo a ka atọrọ ama ọrụ nke Lope de Vega Peribáñez na Ọchịagha nke Ocaña. Dị ka a ga-asị na nke ahụ ezubeghị, a mụrụ ya Alonso de Ercilla, edemede nke Araucana.
Ụlọ elu dị na Tembleque
Ọ dị n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ógbè Toledo na ihe dị ka kilomita iri ise na ise site n'isi obodo ya. Ọ na-enyekwa gị ọmarịcha Main Square nke sitere na La Mancha. N'iji atụmatụ ala dị n'akụkụ anọ, ọ nwere oghere ndị ogidi na ogidi na-akwado na akụkụ elu ya. Ewubere n'etiti narị afọ nke XNUMX na XNUMX, o nwere atụmatụ baroque na ihe ịchọ mma osisi dị oké ọnụ ahịa. N'ihe banyere nke a, isi ohere na-apụta ìhè, kpuchie site na cantilever nwere echiche hipped.
Ọ bụkwa baroque si na narị afọ nke XNUMX. ụlọ elu, nke ekwuputala dị ka ihe ncheta nka nke akụkọ ihe mere eme ma pụta ìhè maka ọmarịcha facade ya. Ma site n'otu oge ahụ bụ nke Postas ma ọ bụ Ochie Barracks, ọ bụ ezie na ọ ka njọ.
N'aka nke ọzọ, ihe ncheta okpukpe kachasị mkpa ị ga-ahụ na Tembleque bụ Chọọchị nke Nwanyị Nwanyị nke Mwere. Ewubere ya na narị afọ nke XNUMX ma nwee atụmatụ mgbanwe site na Gothic ruo Renaissance. N'èzí, ọ pụtara ìhè maka nnukwu ụlọ elu ya na, n'ime ime ya, e nwere ọtụtụ ụlọ ekpere, ndị nke Jesús Nazareno na Virgen del Rosario pụtara ìhè.
Emechara ihe nketa okpukperechi nke obodo Toledo site na hermitage nke La Purísima Concepción, Cristo del Valle, Loreto na San Antón. Ma ihe ka mma bụ nke sitere na Veracruz n'ihi ọdịdị octagonal ya na-ejedebe na dome.
Escalona, ​​n'akụkụ mmiri nke Alberche
Castillo de Escalona, ​​obodo ọzọ mara mma nke Toledo
Ọ bụkwa nke, dị ka La Puebla de Montalban, nke mpaghara Torrijos, ọ bụ ezie na na nke a ọ dị n'akụkụ osimiri Alberche. Ọ ga-abụrịrị na ndị mmadụ bi na ya kemgbe oge ochie, dị ka Celtic, Roman na Visigoth ka a chọtara na mpaghara ahụ. Ugbua na Middle Ages, ọ dị oke mkpa n'ihi ọnọdụ ya dị mkpa.
N'ezie, nnukwu akara nke Escalona bụ ya nnukwu ụlọ eze, nke na-enweta aha a n'ihi na ọ mejupụtara ebe e wusiri ike n'onwe ya na obí Mudejar. Edekọwo ịdị adị ya na narị afọ nke XNUMX, ọ bụ ezie na e kwenyere na ọ bụ ọbụna mgbidi ndị Rom na mbụ. N'aka nke ọzọ, na-aga n'ihu na resonances agụmagụ nke anyị na-akọwara gị na dị ka akụkọ ifo, anyị ga-agwa gị na na nnukwu ụlọ. Nwa ọhụrụ Don Juan Manuel, onye ode akwụkwọ ochie nke nyere anyị onyinye Gụọ Lucanor.
Ị ga-ahụkwa n'ógbè ahụ ọnụ ụzọ ámá san miguel, nke e nwere ụlọ elu. N'akụkụ nke Saint Vincent, bụ ndị e chebere na mgbidi ochie. Ụlọ ụka kacha mkpa dị na Escalona bụ nke edoro nsọ nye San Miguel Arcángel, nke e wuru n'elu ụlọ nsọ Romanesque oge ochie. N'ime, ị nwere ike ịhụ ọmarịcha ebe ịchụàjà nke baroque. N'otu aka ahụ, ihe nketa okpukperechi nke obodo na-mechara site na Ebe obibi ndị nchụpụ nke Franciscan Conceptionists. Mana Escalona na-enyekwa gị square Castilian. Ọ bụ Nke Don Juan Manuel, nke dị n'ime ya ụlọ kansụl, taa Municipal Library nwere obere ngosi ihe mgbe ochie, na ọmarịcha bandwit.
N'aka nke ọzọ, Escalona amarala ka ọ ga-esi megharịa onwe ya dị ka ihe ngosi nka obodo iji dọta njem nlegharị anya. N'okporo ámá ya, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ihe atụ nke ọrụ onye na-ese ihe n'okporo ámá Maazị Stroke. Na, n'ikpeazụ, ọ bụrụ na ị gaa na obodo n'oge okpomọkụ na-adị gị ka ị na-asa ahụ, ị ​​nwere a osimiri osimiri dị n'akụkụ osimiri Alberche. Site na ya, ị ga-ahụkwa akwa mmiri mara mma sitere na narị afọ nke XNUMX.
N'ikpeazụ, anyị egosila gị ụfọdụ ọmarịcha obodo Toledo. Ma anyị nwere ike ịgwa gị gbasara ọtụtụ ndị ọzọ, ebe ọ bụ na mpaghara a nwere ndị dị oké ọnụ ahịa n'ezie. Dịka ọmụmaatụ, anyị ga-ehota gị Oropesa, ya na ụlọ elu ya abụọ na ọmarịcha elekere elekere ya; Techaa, ya na Ọnụ Ụzọ Ámá Caliphate ya na Ụlọ Nzukọ ya nke La Vela; Ndị Toboso, ala Dulcinea na-enweghị ọgbọ; ọgọ nwanyị, ya na igwe ikuku nke La Mancha, ma ọ bụ nke ukwuu Torijos, ya na ọmarịcha ụlọ akwụkwọ kọleji Santísimo Sacramento. I cheghị na ha bụ ihe mere ha ga-eji gaa na obodo ndị a mara mma na Toledo?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » España » Obodo ndị mara mma nke Toledo